FALANQEYN: Goorma ayay soo bilaabatay fikradda mideynta Soomaaliya iyo Itoobiya? – PUNTLANDTIMES KA DHIGO WEHEL
DAAWO:Masuul ka tirsan xisbiga UCID oo fashiliyey siraha Muuse Biixi & Arin aanan la filayn oo banaanka timid 38 mins ago
Home 2018 June W.Gudaha, Wararka Maanta, Warbixino FALANQEYN: Goorma ayay soo bilaabatay fikradda mideynta Soomaaliya iyo Itoobiya?
FALANQEYN: Goorma ayay soo bilaabatay fikradda mideynta Soomaaliya iyo Itoobiya?
One thought on “FALANQEYN: Goorma ayay soo bilaabatay fikradda mideynta Soomaaliya iyo Itoobiya?”
origino June 19, 2018 at 7:15 am · Edit
Anigu tani waxay ila tahay in maamulka farmaajo iyo kheyre heshiiskan uu yahay mid ay kula tartamayaan xiriirka gaarka ah ee dowlad goboleedyada kala dhexeeyo Etoobiya oo ay leeyihiin annagaa wax kasta idiin saxiixaynaa annaga nala macaamila waana siyaasad daciifnimo ah oo awoodda dalka sii wiiqeyso etoobiyana ay game ku dheesho. waxaan oran lahaa intaad etoobiya heshiisyadA LA SAXIIXAYSAAN LA HESHIIYA gaas xeef axmed madoobeIYO SHARIF SAKIIN, WAARE IYAGA HADAAD IS FAHMI WEYDAAN CID AAD HOGAAMIN KARTAAN MA JIRTO SAXIIB XALKa somaliya etoobiya oo heshiis la galo kuma imanayo xalka somaliyana somaliduu ku jiraa ninkaan ogeenow hadbo derbi isku qaad wax xal ah soo kordhin meysid